एनएलजी इन्स्योरेन्सको खुद नाफा ३५.२२ प्रतिशतले बढ्यो - प्रति सेयर आम्दानी कति? - Business Awaj
Home Insurance एनएलजी इन्स्योरेन्सको खुद नाफा ३५.२२ प्रतिशतले बढ्यो – प्रति सेयर आम्दानी...
एनएलजी इन्स्योरेन्सको खुद नाफा ३५.२२ प्रतिशतले बढ्यो – प्रति सेयर आम्दानी कति?
एनएलजी इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को तेश्रो त्रैमासिक वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यस त्रैमासमा २१ करोड २८ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको छ भने गत आर्थिक वर्षको सोही अवदीमा १५ करोड ७३ लाख कमाएको थियो । तुलनाको अवधिमा खुद नाफा ३५.२२ प्रतिशतले बढेको छ ।
यस अवधिमा कम्पनीले ३८ करोड १३ लाख खुद दावी भुक्तानी गरेको छ । त्यसैगरी अभिकर्ता कमिशन बापत ५ करोड २१ लाख र व्यवस्थापन खर्च बापत १६ करोड ७६ लाख खर्च गरेको छ । भुक्तानी हुन बाँकी दावी रकम ९८ करोड ९० लाख रहेको छ ।
हाल कम्पनीको चुक्तापुँजी १ अर्ब ९ करोड रहेको छ भने जगेडा कोषमा ४२ करोड २८ लाख रहेको छ । कम्पनीको बीमा कोषमा १ अर्ब रहेको छ भने महाविपत्ती कोषमा ४ करोड १२ लाख रहेको छ ।
कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी २५।८८ रहेको छ भने नेटवर्थ २३३.७८ रहेको छ । त्यसैगरी मुल्य आम्दानी अनुपात ४४.९४ गुणा रहेको छ ।
Previous articleजनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको खुद नाफा ९३ प्रतिशतले बृद्धि
Next articleदुई कम्पनीको सेयर मुल्य समायोजन
मैलुङ खोला जलविद्युतको आइपीओ सेयर नेप्सेमा सुचिकृत
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले ४० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने